Malunga nathi -Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
IXUZHOU ROC KWIINKONZO ZONKE ZOKUHWEBA., LTD
IQela leHlabathi leKhayangowona mvelisi mkhulu nelithumela ngaphandle ngamaplanga kunye neemveliso ezinxulumene nazo e-China, neyasekwa ngo-1993 kunye neenkxaso ezi-6. Ngoku sonwabele umgca wemveliso engama-73 yefilimu ejongene neplywood kunye neplywood entle.
Imveliso yethu yazo zonke iintlobo zeplywood yi-220,000m3 kunye ne-1,000,000m3 yefilimu ejongene neplywood ngonyaka ngamnye. Ukuxhotyiswa ngoomatshini abaninzi abaphambili, i-Italian IMEAS sanders, oomatshini baseJapan be-UROKO, iVeneer Joint Tenderizers kunye noomatshini abakhulu abomileyo, inkampani izimisele ukuvelisa nokuthumela iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kwifilimu ejongene neplywood kunye neplywood entle kunye neAntiskid Plywood.
Siphumelele iwonga "loPhawu lwentengiso lwaseTshayina oludumileyo", "iiMveliso eziQinisekisiweyo zoMgangatho waseJiangsu" kunye "neAAA Corporate Credit".
Inkampani inyanzelisa umgaqo wolawulo olusemgangathweni kunye nokunyaniseka ngalo lonke ixesha.
Kwaye iimveliso zethu ziye zaqinisekiswa yi-IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU kwaye zithengiswe kakuhle kumazwe angaphezu kwe-100 kwihlabathi liphela, njengeJamani, i-Australia, i-USA, i-Chile, i-Libya, i-UAE, i-Saudi Arabia , Korea, Japan, njalo njalo.
Ngenjongo yokutya kwiimfuno zorhwebo lwehlabathi, siye sasebenzisana nabathengisi abaninzi bezinto zokwakha, sinoxanduva lokuyila kunye ne-OEM yeplywood yabo kunye nefenitshala.
Ngokusekwe kulawulo lwethu olusemgangathweni ophezulu, ulungiselelo oluhle kunye netekhnoloji ekhokelayo, iqela lehlabathi lasekhaya likhokelela kwimarike kwaye liyazingca ngokunikezela ngezi mveliso kunye neenkonzo kubathengi bethu.